1, Usuku lokuqala lwenyanga yokuqala yokuthwasa kwenyanga lwalungabizwa ngoMkhosi Wentwasahlobo ezikhathini zasendulo, kepha lwalubizwa ngosuku lukaNcibijane. 2, Emlandweni waseChina, igama elithi "Umkhosi Wentwasahlobo" akuwona umkhosi, kepha ukubhekiswa okukhethekile kokuthi "Ukuqala KweNtwasahlobo" kwe-24 solar ter ...
I-KEMA yisifinyezo sesiDashi (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Ububanzi bebhizinisi le-KEMA landa kancane kancane, Futhi laba yisiphathimandla esizimele esihola phambili embonini yezinsizakalo zamandla omhlaba. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-80, KEMA ubelokhu esiza amaklayenti ukubikezela isiqondiso ushintsho futhi s ...
I-Outdoor 33kV 35kV 36kV 1250A I-Vacuum Circuit Breaker ene-Transformer yamanje
I-Outdoor 33kV 35kV 36kV 1250A I-Vacuum Circuit Breaker NgeTransformer. Ingasebenza kahle ekushiseni kwama-ambient: - 40 ℃ ~ + 40 ℃. Isakhiwo esilula, ukugcinwa kwamahhala nokuphila kwensizakalo ende kusetshenziswa ezingeni lamandla kagesi angama-35kV, kufaka phakathi imigqa ephezulu, amabhizinisi ezimboni nawezimayini, iziteshi zamandla, i-subst ...
Kungani imitha kufanele ifakwe i-transformer? Lokhu kwenzelwa ukugwema ukushisa imitha nokonga imali. Mayelana nokonga imali, intengo yemitha encane yamanje ene-transformer izoba ngaphansi kunaleyo yemitha enkulu yamanje. Ngokombono wokuphepha kwemitha kagesi ...
Umshini ongaphandle wesifunda ophula umthetho
Esifundeni, i-breaker breaker isebenza njenge-fuse, kepha i-fuse ingasebenza kanye kuphela, ngenkathi ama-breakers wesifunda angasetshenziswa kaninginingi. Uma nje i-current ifinyelela ezingeni eliyingozi, ingadala ngokushesha isekethe evulekile. ucingo bukhoma in the wesifunda ixhunywe zombili imikhawulo sw ...
Izici zokuphuma kwe-fuse cutout
(1) Izinzuzo eziyinhloko zokusikwa kwe-fuse cutout, Ukukhetha okuhle. Inqobo nje uma isilinganiso esilinganisiwe sesixhumanisi se-fuse sefusezi esezingeni eliphezulu nengezansi ihlangabezana nezidingo ze-1.6: 1 isilinganiso sokukhethwa ngaphezulu kwesilinganiso esichazwe kuzinga likazwelonke nele-IEC standard, okusho ukuthi isilinganiso samanje se-uppe ...
I-COVID-19 yisifo esisha segciwane esihlasela abantu abangaphezu kwesigidi esingu-1 emhlabeni jikelele!
Kungadluliselwa kusuka kumuntu kuye komunye. Kukholakala ukuthi leli gciwane lidluliselwa ikakhulukazi lisuka kumuntu liye kumuntu. Phakathi kwabantu abasondelene kakhulu (cishe 2m). Amaconsi okuphefumula akhiqizwa ngumuntu onegciwane lapho ekhwehlela, ethimula noma ekhuluma. Lawa mathonsi amanzi angawela emlonyeni noma ekhaleni le ...
Sibutsetelo Umshini wesifunda full
Ukwethulwa kwe-Vacuum circuit breaker "I-Vacuum Circuit Breaker" ithola igama layo ngoba indawo yayo yokucisha i-arc kanye nendawo yokuhlukanisa igebe lokuxhumana ngemuva kokucima i-arc zombili i-vacuum ephezulu; inezinzuzo zosayizi omncane, isisindo esincane, esifanele i-operat ejwayelekile ...